Somaliland: Muwaadin Sheegay In Uu Muddo Laba Wiig Ah Xabsiga Ugu Jiray Xadhig Siyaasadeed Ay Xukuumaddu Kula Kacday Iyo Halka Uu Farta Ku Fiiqay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Muwaadin Sheegay In Uu Muddo Laba Wiig Ah Xabsiga Ugu Jiray...
Aqoonyahan Jaamac Sahal Oo Wax Laga Xumaado Ku Tilmaamay Xadhig Uu Tacadi Ku Sheegay
Jaamac Yuusuf Sahal oo ah nin dhallinyaro ah oo aqoon yahan ah ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay xadhig muddo laba toddobaad ah oo uu ku sugnaa xabisiga dhexe ee Magaalada Burco isaga oo aan garanayn cid alla cid uu dambi ka galay iyo cid soo xidhatay toona kaliyana loo sheegay in amarka xadhigiisa laga soo bixiyay dhinaca masuuliyiin xukuumadda ah taasi oo uu ku tilmaamauy tacadi iyo amar ku taaglayn shuruucda waddanak baal marsan.
“Xabsiga dhexe e Burco waxaan ku xidhnaa muddo laba toddobaad ah waxaana la I soo qabtay 14-kii Bisha waxaanan xidhnaa illaa iyo 25-kii Bishan May ee aan ku jirno. Ma jirin waaran la igu xidhay oo la igu qabtay kaliyana waxa la igu xidhay oo la ii sheegay in la igu xidhay amar ka yimid xagga sare. Waxa aan aad ugu mahad naqayaa ciidamada Bilayska Somaliland qaybahooda kala duwan. Si gaar ah waxa aan mahadnaq ugu dirayaa taliyaha saldhigga dhexe ee Burco Taliye Khadar. Si qurux badan bay iila dhaqmeen isaga iyo ciidamada bilayskuba. Ma jirto maxkamad la I hor geeyey. 14 maalmood iyo wax ka badan ayaan iska xidhnaa waxaana jira dad badan oo u xidhan xadhig siyaasadeed. Xadhiga siyaasiga ahi waa uu ka duwan yahay xadhiga siyaasiga ah ee kale. Somaliland waa waddan diiradda adduun weynuhu ku hayo oo dimuquraadi ah, haddii uu sidan u sii bato tacadiya siyaasiga ah iyo xadhiga ujeedooyinka lihi waxa ay keenaysaa in Somaliland gasho go’doon siyaasadeed oo ay adduun weynaha intiisa kale ka gasho go’doonkaasi. Adduunweynuhu waxa ay si gaar ah u daba galayaan inta u xidhan siyaasadda. Waxa aan xasuustaa saxafiga caanka ah ee Faysal Al Qaasim oo xilli aan joogay caasimadda Suudaan ee Khartuum booqasho ku yimid waxa uu baadhay dhammaan dadka u xidhan arrimaha siyaasadda. Markaasi uu baadhay xabsiyada ayuu soo waayay cid u xidhan arrimo siyaasadeed. Xadhiga siyaasadda dadka loo xidhaa waxa uu caqabad ku noqonayaa geeddi socodka arrimaha siyaasadda ee somaliland. waa waxa Wasaaraddeena arrimaha dibadda Go’doon ka dhigay. Waxaan u soo jeedinayaa dawladdu in ay arrimahaasi oo kale ka waantowdo. Arrinta layaabka lihi waxa ay ahayd in aan waayayba cid arrinkayga dhinac ka ah oo dhibane ii ah oo la ii soo xidhay. qofbaa qof iska xidhaya oo uu meel ugu xidhnayaanayaa waa wax aad u tacadi ah oo aad u liita taana mustaqbalka waa la innaga saari doonaa. Kaliya waxa la ii xidhay in taliyuhu ii sheegay in amar Hargeysa kaga yimid oo sidaa la ii xidhay. waaran soo qabasho ah iyo wax alla wax la igu xidhay midna ma jirto. Sii dayntayda jihooyin fara badan ayaa fududeeyey kiis cad oo la igu hayay oo keenaya in aan sii xidhnaadaana muu jirin. Taasaa keentay in sii dayntaydu fududaato cid kasta oo ka qayb qaadatayna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin” ayuu yidhi Jaamac Yuusuf Sahal.
Jaamac Yuusuf Sahal ayaa hore uga hadlay dhaliilo uu u soo jeediyey Safiirka Somaliland ee Imaaraadka Mudane Baashe Cawil oo uu ku tilmaamay nin xoolaha umadda iyo hantida umadda ka dhaxaysay xaraashay isaga oo ka faa’iidaysanaya xididnimada madaxweynaha ka dhaxaysa, kaasi oo u muuqda halka laga raacay muwaadinkan.
Cabdillahi Fadal Iimaan
Somaliland: oo Gacanta ku Dhigtay Askar ka Tirsan Liyuu Booliiska iyo Xog Waranka Talliye Fooxle